brake mota mutengo 1 hp 5hp 2 hp brake motor suppliers
brake motors mugadziri
Maindasitiri akamedura Motors
Yakasiyana-siyana yeClutch brake mota, Electric Brake mota kuMutengo uri nani kuChina. Brake Motor Suppliers uye Mugadziri, Komisheni uye Maindasitiri Ekushandisa.
Isu Tinopa Kwakakwirira Mhando, Yakaderera Mutengo Industrial Brake Motors.
Makore emabhureki emagetsi ekugadzira ruzivo ndeye kungokupa iwe mhando yepamusoro uye yakasimba mota. 1 hp brake mota mutengo, 2 hp mota yakamhara, Iyo brake mota inosanganiswa brake uye mota package, kazhinji inosunganidzwa pamwechete kuburikidza nekubatana C-kumeso flanges. Magetsi mabhureki emagetsi anoshandiswa kudzikisira kana kubata mitoro yemotokari kana simba rachekwa nemaune kana netsaona. akamedura mota vatengesi, 5hp akamedura mota.
Series ine zvikamu zvitatu, asynchronous brake motors General Chinangwa Maindasitiri akanyudzwa zvachose 3 hp brake mota. Electromagnetic Brake Motors yakavhurika drip chiratidzo, kana kuputika chiratidzo dhizaini.
Yakasiyana siyana yemagetsi elekitori: imwe chete, nhatu chikamu, brake motors ine yakakwira braking nguva uye yakakwira kumhanya basa. nemhando dzakasiyana siyana dzekusarudza uye yekumisikidza maserura.
YEJ akateedzana nemagetsi akamedura mota, yakagadzirirwa maererano neIEC standard, AC Brake Motors ine Industrial Lift Motor Brake. 3 Phase Induction mota, Brake motors, Speed ​​Inosiyana mota. Tsvaga pano ruzivo rwe Electromagnetic Brake mota.
Iyo magetsi-disc disc brake inogoneswa, ingave DC kana matatu phase AC yazvino, Kazhinji, servo motors anodzoserwa uko mabhureki akapfekwa.Power-Off Operation Inertia Dynamics AC -style, chitubu chinoiswa mota mabhureki akagadzirirwa kudzikamisa kana kupaka inertial mitoro kana magetsi akadzimwa. Kumashure Caliper Kupaka Brake Servo 3C0998281. Iwo anowanikwa mune 6 & 12 spline (Grove) shafts. Brake rotor pad chinhu chakajairika chinhu mumotokari yanhasi.
Kana chero zvigadzirwa izvi zviri zvako, tapota taura nesu!